News - Naqshadeynta Naqshadeynta Nolol Fudud Oo Kuu Keenaysa Waxaad U Baahan Tahay
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato nalalka xuddunta aadanaha, Mr Andreas Schulz wuxuu nala wadaagayaa mashaariic badan oo nalal dhismeedka ah wuxuuna caddeeyay in nalalka aadanaha ay meel walba yaalliin, isla markaana ay muhiim u tahay inay saameyn ku yeeshaan shucuurta aadanaha iyada oo loo marayo iftiin.
Sida khibrad qibrad u leh soosaaraha nalalka iyo dhoofinta, waxaan si fiican uga ognahay macaamiisha 'ay adagtahay in laga xusho nashqadaha nalka kala duwan ee nalka iyo iftiinka muraayadda, laambadda saqafka sidoo kale waxay u baahan tahay in laga xusho midab iftiin kala duwan leh.
Ka dib horumarin iyo cilmi baaris isdaba joog ah, nalalka Haus ayaa ka bilaabmay hal HL60C09 taxane ah hagaajinta naqshadeynta - saqafka iyo hareeraha waddo hal laambad ah, ka dhig run iyo fudeyd isbeddel nooc kasta oo u dhexeeya nalka iftiinka iyo iftiinka saqafka oo ku habboon in lagu doorto nalkaaga khaaska ah ee raaxada leh midab sida aad u baahan tahay. Dhammaadka isticmaaleyaashu waxay u baahan yihiin oo keliya inay doortaan hal shey si ay u noqdaan labadan ku habboonaanta dhabta ah.
Hoos waxaa ku yaal hal dhalaal iib-kulul iyo iftiin wareegsan oo iftiin leh iyo iftiinka saqafka hal naqshad.
• Beddelaadda midabka CCT, xulo xulashooyinka heerkulka midabkaaga ka hor intaadan rakibin dhejinta.
• Habka rakibaadda ayaa si fudud u beddelaya, u xulo habka rakibaaddaada si xur ah sida laalaadda ama dusha saqafka sare ka hor inta aanad rakibin qalabka nalka.
• Dusha sare oo siman oo madow ama caddaan ah oo caan ah
• Isha tamarta keydinta tamarta
• Cimri-dheeri oo wata nooca LED-ka iyo darawalka LED-ka
• Dimmable heli karaa sida looga baahan yahay, 0-10V dimmable, wajiga-cut dimmable, dimm dimmable, Dali dimmable
• 3 sano oo damaanad ah
Qeexitaannadu waa sida hoos ku qoran:
Ka dhig shakaalka iyo dahaadhkaba sidii laambad shidan (A)
Ballaca 400 x H1500mm
Ballaca 600 x H1500mm
Ballaca 800 x H1500mm
Ka dib markaad ka saartid shakaalka iyo dahaadhka sidii laambad saqaf ah (B)
Ballaca 400 x H90mm
Ballaca 600 x H90mm
Ballaca 800 x H90mm
Madow / Caddaan / Waxyaabo kale oo looga baahan yahay
Iftiinka aadanaha wuxuu nolosha ka dhigayaa mid fudud oo raaxo leh, nolosha wuxuu ku ifiyaa hal nal!
Nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.